Malagasy Mivoatra : Iza No Sahy Hijoro Hiady Amin’ny Fahantrana ? | Gasy ImpACT
1. Tsy fanajana ny fananana iombonana: impiry isika no maheno ny fiteny hoe: “’Zahay angaha andova an’io?” na “Fa fananan’ny dada sa fananan’ny neny?”. Fisainana iray maneho ny tsy fanajana na tsy fikajiana ny foto-drafitr’asa eny rehetra eny na fanimbana tsotra izao ny fitaovana izay tsy an’ny tena manokana.
2. Tsy fanarahan-dalàna sy fitsipi-pifehezana: Ohatrany toa samy mampiatra ny lalàna amin’ny itiavany azy ny rehetra ka dia samy manao izay saim-pantany. Na eny amin’ny arabe na eo amin’ny asa fandraharahana na sehatra madinika eny amin’ny fiaraha-monina eny. Hany ka rehefa misy ny olana dia samy miantso ny “polisiny” ny tsirairay.
3. Tsy fifanajana sy fifampitsinjovana: Mety efa samy ketraky ny fiainana ve ka dia mila hifanaikitra ny tsirairay. Mifanopa, mifaniratsira, mifanely Tsaho, mifampiantsy ady, mifanimbazimba. Ny eny antsena sy eny andalana ary eny ambony Taxi-be efa tsy lazaina intsony. Fa ny mbola vao mainka mampiketraka dia ny fahitana ny tsy fifanajana eny amin’ny Hopitaly sy birao isan-karazany.
4. Tsy fitandremana ny tontolo manodidina: Efa mahazatra ny mahita fako sy loto eny rehetra eny. Manampy trotraka an’izany ny fofona maimbo isakarazany. Tsy mifidy sarangan’olona ny fanariana fako eny andalana, ny fanaovana maloto amin’ny toerana takotakona na tsia. Eo koa ny fanariana rano maloto tsy fata-pihaviana eny amin’ny tatatra. Na ny mety ho fiparitahan’my aretina noho ireny loto ireny aza tsy mampihontsona antsika.
5. Fanaovana kolikoly sy tsolitra amin’ny endriny samihafa: Efa fahazarana sy fiainantsika mihitsy ny “manipy” na “mametraka kely” etsy sy eroa. Samy manana ny maha-poritra azy ny tsirairay ka tsy mampaninona na dia mividy ny fahamarinana azy.
6. Tsy fanajana ny tontolo iainana: Efa faheno mandava-taona ny ady atao amin’ny fitandrovana ny zavaboary sarobidy eto Madagasikara. Fa firy amintsika no mandray andraikitra mivantana amin’ny famerana ny setroka maloto avoakan’ny fiara sy ny orinasa na ny loto hafa manimba ny rivotra iainana sy ny rano ary ny ala. Iza ny olon-tsotra hiasa saina ny amin’ny biby any anaty ala any? Ny alika eo an-tanàna aza voatoraky ny tapa-biriky.
7. Tsy fanomezana hasina ny sembana: Olona manan-jo sy manana ny maha-izy azy ny olona manana kilema. Mbola lavitra ny ezaka ny amin’ny fametrahana foto-drafitr’asa manokana ho azy ireny. Etsy andaniny, mahagaga sy mampalahelo ny mahita ny olona sasany mihomehy na manao sangy ratsy amin’izy ireny. Tia mitsiky sy mihomehy ny Malagasy fa misy fetrany ihany koa anefa ny zavatra rehetra.
Misy sehatra hafa tsy voalaza ve tonga ao antsainao? Aza misalasala manoratra an’izany etsy ambany.
Tsy eny amin’ny kianjan’ny “13 Mai” ihany no fitakiana fiovana fa eny amin’ny sehatra rehetra misy antsika andavanandro dia betsaka ireo zavatra madinika mila fiheverana na toetra ratsy mila ovaina satria ny fikambanan’ireny rehetra ireny no miteraka fiaraha-monina goragora sy mampiforetaka ny toetsaintsika amin’ny tany.
Tsy mahatoky amin’ny kely indrindra ka tsy mahatoky amin’ny be
Hita sy tsapa fa na amin’ny zavatra kely sy madinika aza dia tsy voafehitsika ny fivoarana sy fampandrosoana ka asa fotsiny rehefa miakatra sehatra goavana sahala amin’ny fanatsarana ny fiainam-pirenena. Dia ho gaga ve isika raha manao izay tiany atao ny mpanao politika sy mpitondra fanjakana isan’ambaratongany. Ka ny fiaraha-monina nivoahany sy nitaiza ary namolavola azy ary sahala amin’izany. Amin’ny fomba ahoana no hantenaintsika mpitondra tompon’andraikitra raha isika natao hitsara azy ary tsy mijoro ho tompon’andraikitra?
Ny tsy fijoroana sy ny tsy fandraisan’ny olo-marina sy ny olon-kendry andraikitra no mampahazo vahana ny olon-dratsy eo amin’ny fiaraha-monina. Voalaza fa antsika vahoaka ny fahefana kanefa firy amintsika vahoaka no mandray andraikitra sy mahalala ny tokony atao manoloana ny tranga-piainana andavanandro?
Erikerika mahatondra-drano hoy ny Malagasy. Ankehitriny tondraky ny tsy fahandriham-pahalemana sy ny fahalovana ary ny fahantrana isika nohon’ny erikeriky ny tsy fandraisana andraikitra, ny erikeriky ny fanekena ny tsy rariny sy ny tsy hitsiny eny amin’ny fiaraha-monina. Ny azo antoka dia ny fijoroana sy fahasahian’ny isam-batan’olona manova zavatra no hitarika fiovana. Raha izao fifampitondrana eto amintsika izao no mitohy dia izay “tsara vintana” sy “be sandry” ihany no ho tafavaoka fa ny sisa kosa dia hitrongy vao homana eny ihany raha tsy maty eny an-dalana.
Cette entrée a été publiée le lundi 21 janvier 2013 à 11:15 et taguée "Malagasy Dream", Ady amin'ny fahantrana, Fahantrana, Fanajana, Fanovana, fiaraha-monina malagasy, Madagasikara sy ny fandrosoana, malagasy mandroso, Malagasy mivoatra, Mandray andraikitra, Mpanao politika, Toetsaina Malagasy, Tompon'andraikitra, Zon'ny sembana et publié dans Lahatsoratra Malagasy, Politique, Social, Uncategorized.	Vous pouvez suivre les commentaires liés à cette entrée par flux RSS 2.0.
" Du Pays du Moramora au Kaizen (2/2 Partie)
État de Droit à Madagascar : Sans Foi Ni Loi »
3 responses to “Malagasy Mivoatra : Iza No Sahy Hijoro Hiady Amin’ny Fahantrana ?”
3 mai 2015 at 12:15
[…] mampalahelo koa dia betsaka ny olona no tsy sahy mitroatra na mitory eny anivon’ny fitsarana eny satria tsy hita be ihany izay atao. Ilana vola sy fotoana […]
Mila Mitraka sy Mandini-tena Isika Malagasy | Gasy.ImpACT
10 août 2014 at 8:15
[…] ho miana-kendry, henjehana fa “miseho milay”, hihomehezana fa manao azy ho mpanara-dalana. Iza ary no andrasana hitondra fivoarana? Sa ve apetraka eo am-pelantanan’ny olona adala, tsy mataho-tody sy tsy mpanara-dalana ny ho […]
Fangoronan-karena : Ny Vola No Maha-Olona | Gasy.ImpACT
1 juin 2013 at 1:35
[…] Mila manova famindra sy manarina ny fomba fijery ary foto-pisaina ny Malagasy. Ny tena olana sy mampalahelo dia tsy hita intsony izay hianteherana. Ny lalàna tsy misy manaja, ny tompon’andraikitra tokony hampiatra azy sy hanara-maso toa miraviravy tanana na miray tsikombakomba. Na ny mpitondra na ny vahoaka anefa dia samy mandrovi-tsihy. Iza no sahy hijoro? […]